> Resource> iPad> Olee otú iji iyi Music ka iPad
Ọ bụ otu nke achicha na-enuba music ka iPad site na kọmputa, mgbe i nwere ọkachamara iPad music transfer ngwá ọrụ. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-amasị ike ikwu na ị a ngwá ọrụ dị ka nke ahụ. Ọ bụ Wondershare TunesGo (Windows). Ngwá ọrụ a na-enye gị ikike iji strimụ music faịlụ ma ọ bụ listi ọkpụkpọ site na iTunes ma ọ bụ kọmputa gị iPad. Ke adianade do, ọ na-adịghị ihichapụ ọ bụla song na gị iPad-akpaghị aka, ma ọ bụrụ na i bu n'obi ime otú ahụ. Ọ pụrụ inyere gị tọghata na iyi AAC, MKA, AC3, AIFF, adaka, AMR, AU, 3G2, FLAC, MPA, MP2, OGG, WMA, ka MP3 effortlessly.
Ọ bụrụ na ị na-eji Mac, na-echigharịkwuru Wondershare TunesGo (Mac). Nke a Mac version ike gị enuba music si nchekwa na kọmputa gị iji iPad.
Download ngwá ọrụ na PC gị na ka iPad gụgharia music.
Cheta na: The Mac mbipute a ngwá ọrụ anaghị akwado nkwanye listi ọkpụkpọ site na iTunes gị iPad. E wezụga na, Wondershare TunesGo n'ụzọ zuru ezu na-akwado iPad na Retina ngosi, iPad Obere, The New iPad na ndị ọzọ. Ego ọzọ detailes banyere ihe niile na-akwado iPads.
Mfe nzọụkwụ iji strimụ music ka iPad
Ugbu a, m ga-amasị-agbalị Windows mbipute a ngwá ọrụ. Usoro iji strimụ music gị iPad na Mac version yiri nke ahụ. Mgbe ahụ, na-ahapụ 'amalite!
Nzọụkwụ 1. Jiri eriri USB jikọọ iPad ka PC
Jikọọ gị iPad ka PC site ịkwụnye n'ime gị iPad si eriri USB. Mgbe ahụ, mgbe ọ ejikọrọ, ngwá ọrụ a ga-chọpụta gị iPad na mgbe ahụ na-egosipụta ya ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. Stream music na iPad
Ebe a, m ga-egosi gị otú ị strimụ music si a nchekwa na PC na iTunes listi ọkpụkpọ na iPad karị.
Na-ekpe kọlụm, chọta na pịa "Media". Mgbe ahụ, pịa "Music" n'elu akara na-egosi music window. Pịa triangle n'okpuru "Tinye". Mgbe ndọpụta ndepụta Pop elu, ị nwere ike họrọ "Tinye File" ma ọ bụ "Tinye nchekwa". Mgbe ahụ, na-agagharị na kọmputa gị ruo mgbe chọta gị chọrọ music faịlụ ma ọ bụ music nchekwa. Iyi ha gị iPad.
E wezụga nkwanye music ka iPad, na ị na-eru nke nkwanye listi ọkpụkpọ site na iTunes Ọbá akwụkwọ na nchekwa gị iPad. Pịa "Playlist" ke hapụrụ kọlụm. Mgbe ahụ, site na ịpị abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Tinye", ị ga-esi nhọrọ abụọ. Otu bụ "Tinye iTunes Playlist", ndị ọzọ bụ "Tinye Playlist si Computer". Họrọ otu na-enuba listi ọkpụkpọ gị iPad.
Nke ahụ bụ ihe niile banyere nkwanye music on iPad. Na ngwá ọrụ a, ị pụrụ ime music gụgharia n'oge ọ bụla. Download TunesGo na nwere agbalị!
Olee otú Tinye Photos ka iPad
Top 4 Ụzọ nyefee Photos si iPad ka Flash Drive
Olee otú iji weghachi iPad si ndabere